Dhageyso:Magaalada Baydhabo Oo Ka Jira Sicir Barar Xooggan – idalenews.com
Baydhabi(INO)- Iyadoo ay jiraan Abaaro keentay Roob la’aantii ka dhacadey gobalada Bay iyo Bakool, ayaa gudaha iyo daafaha Magaalada Baydhabo Ee Xarunta Gobolka Bay ay ku haysataa biyo la’aan iyo cunto yari dadakii beeralayda iyo xoogsatadii danyarta ahayd ee xoogsan jiray waxaa ay maalinta cunaaan.
Waxaa sare u kacay sicirka raashinka qutul daruuriga ah ee ay inta badan isticmaalaan Dadka sida masagada,Galayda,Digirta,qamaddiga iyo sisinta looska.
Waxay shooda badarka magaalada Baydhabo ka joogtaa 8 kun oo shilin Somalia, masagada iyo Galayda qoysaska danyarta ah waxaa ay ka dhigtaan soor ,Canjeero iyo muufo taasoo qoyska oo dhan wada gaarta iyadoo uusan qof reerka ka mid qadin.
Qaar ka mid ah dadka ay saamaysay abaarta cunto yarida iyo biyo la’aanta Ka taagan Qiibo ka mid ah Gobolka Bay waxay ay IdaleNews.com u sheegeen in raashinka ka soo go’a gudaha dalka in uu yahay mid s iweyn ay u isticmaali jireen oo ay 90% noloshooda ku tiirsan tahay, maadaama hadda la waayay inta yare e hada hartay ay sii qaaliyoobayaan , in noloshooda ay sii xumaanayso.
Biyaha Yarida ayaa kor u sii kacaya maalinba maalinta ka dambaysa iyadoo horay fuustada biyaha gudaha magaalada Baydhabo lagu gadi jiray 20 kun shilin Somala , maantana waxaa ay maraysaa inta u dhaxaysa 30-40 kun oo shilin soomaali ah.
Ugu dambeyntii, Tani waxay keentay in ay adkaato nolosha beeralayda iyo dan yarta xoogood ku noolka ah ,iyadoo ay isa sii tarayso noloosha sii xumaanaysa isla markaana aysan jirin ilaa iyo iminka cid isku howshay ka warqabka xaalada dadkan ee u baahan gurmaddiyo gaar ka hor inta aysan xaaladda faraha ka bixin.
Wariye Faysal Dhaayow Xuseen
Daawo:Xuska Dhalashada Nabiga (NNKH) oo si wayn looga Xusay Magaalad Xudur